ग्लोबल कलेज डिबेट क्लबले "डेयर टू स्पिक 2.0" आयोजना गर्दै - firewordsdaily
ग्लोबल डिबेट क्लब, ग्लोबल कलेज अफ म्यानेज्मेन्टका बिध्यार्थीहरुको एउटा समुहले सन्चालन गर्दै आएको गैर नाफामुलक क्लब हो। यस क्लबले देशका कर्णधार मानिने युवाहरुको चौतर्फी बिकासका लागी बिभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएको छ। ग्लोबल डिबेट क्लबले बिध्यार्थीहरुको आत्मबल बढाउन, बादबिवाद शैली निखार्न र बक्तृत्व कलाको अभिबृद्धिका लागी गर्दै आएको कार्यक्रम "डिबेट
आधार" , "डेयर टू स्पिक" आदी हुन। देशमा भईरहेका कार्यहरुलाई मध्यनजर गर्दै देशका समस्याहरु लाई सम्बोधन गरि युवाहरुले समस्या निर्मुल पार्न गर्नुपर्ने पहल का बारेमा छलफल गर्ने यस क्लवले यो भन्दा अगाडी भारत र नेपाल बिचको सिमा बिवादबारे चर्चा गर्नका लागी "डेयर टू स्पिक" नामक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो जहाँ युवाहरुले आफ्ना धारणाहरु प्रस्तुत गर्ने अवसर जुटाएका थिए।
"डेयर टू स्पिक" को सफल्ता पछी अब भने यो समुहले "डेयर टू स्पिक 2.0" आयोजना गर्न गईरहेको छ। "Corona: halting present, NEB: halting future" अर्थात् " कोरोना: बर्तमानमा अवरोध, एन. ई. बी : भविस्यमा अवरोध" भन्ने शिर्सकमा हुन लागेको यो बक्तृत्व कला प्रतियोगीतामा नेपाल भरिका युवाहरुले सहभागिता जनाउन पाउनेछन्। हाल स्थगित
कक्षा १२ को परिक्षालाई इङ्गित गरेर समुहले यो शिर्सक चयन गरेको हो। कक्षा १२ का बिध्यार्थीहरु अहिले १२ कै पाठयपुस्तक पढेर बस्नू वा आगामी शिक्षा बारे सोच्नु भन्ने कुराको दोधारमा परेका छन्। यो अनिस्चित परिस्थितीले कक्षा १२का बिध्यार्थी हरु लाई निकै कठिनाई सिर्जना भईरहेको छ। एन.ई. बी को यो ढिलासुस्ती का कारण बिध्यार्थीहरुको भविस्यमा असर पर्ने हो की भन्ने चिन्ता अहिले सबै मा छ। अर्को परिपाटी बाट सोच्दा कोरोनाको महामारीको बेला परीक्षा भन्दा स्वास्थ्य ठुलो हो भन्ने कुरा आउन पनि सक्छ। प्रतियोगी हरुको दुवै तर्फी बयान र धारणा सुन्न समुह निकै उत्साही छ।
प्रतियोगीता मा भाग लिन का लागी प्रतियोगीहरुले बढिमा ५ मिनेट को भिडियो खिचेर समुहलाई गुगल ड्राइभ को मदत बाट इमेल गर्नू पर्ने हुन्छ। भिडियो पठाउने समय भने अक्टूबर ३ देखि अक्टूबर १६ सम्म को रहेको छ। नतिजा भने zoom app मार्फत अक्टूबर २0 मा हुने छ। कलाको कुनै उमेर हुदैंन भन्ने सोच राख्दै समुहले सबै उमेरका प्रतियोगी हरुलाई प्रतियोगिताका लागी स्वागत गरेको छ। यस कार्यक्रमका प्रमुख निर्णायक बक्तृत्व कला का प्रशिक्षक प्रणव काफ्ले हुन् भने अरु दुई निर्णायक ग्लोवल कलेजकै अंग्रेजी भाषाका शिक्षक भाबेश लाभ र नेपाली भाषाका शिक्षक शेषनाथ पौडेल हुन् । साथै यस कार्यक्रमका प्रायोजकहरु "बशिस्ट इंटरनेशनल", "प्राइम सी ए" , "इन्साइट", " करियर पोइन्ट" , " रैपर्स रैप" , "फायरर्वर्ड्स" आदी रहेका छन्। क्लब प्रायोजक सबै प्रती आभारी छ।
लकडाउनका बेला समय एसै खेर फाल्नु भन्दा केही सिर्जनात्मक गरेर समयको सदुपयोग गरौँ भन्दै ग्लोबल डिबेट क्लबले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा धेरै भन्दा धेरै सहभागीको आशा समुहले गरेको छ।
थप जनकारीका लागि globaldebatec@gmail.com मा सम्पर्क गर्नसकिने छ।